Ngaphandle kokudla okumnandi - amaqebelengwane, amaphayi, amaqebelengwane namaswidi - ukucabanga ukuthi imenyu yonyaka omusha ayinakwenzeka. Phakathi naleso sikhathi, zinomzimba omuhle, futhi okubaluleke kakhulu - okunye okuwusizo - lena izithelo zomisiwe .
Ziyathokoza ngenxa ye-fructose ne-glucose. Ngakho-ke, naphezu kokuqukethwe kwekhalori ephakeme, akulimazi isibalo. Ngaphezu kwalokho, zonke izithelo ezomile zinezinto eziwusizo ezihlukahlukene, futhi izikhathi eziningana ngaphezu kwezithelo ezintsha!
Zicebile ku-provitamin A ne-potassium, ngakho-ke ziyasiza ezifweni zenhliziyo nezinso. Leli ithuluzi elihle kakhulu ekwandiseni i-hemoglobin egazini: kuzo zonke amabhilikri amahlanu - isimiso sezinsuku zonke se-iron ne-calcium. I-Vitamin B5, ekhona kuma-apricot omisiwe, ikhuthaza ukushiswa kwamafutha futhi yandisa ukondla, okubalulekile ngesikhathi sokushisa.
Icebile izinto ze-ballast, amavithamini A, iqembu B, i-potassium, i-calcium, i-magnesium, i-zinc, i-iodine. Ngakho-ke, umbono ovamile wokuthi lesi sithelo esomile singagcina kuphela ukusebenza komathumbu akuyona into ephelele. I-anti-depressant ehle kakhulu, futhi futhi ikhambi elihle kakhulu lokuqinisa imishanguzo. Muva nje, ososayensi bathole ukuthi ngaphambi kweqhawe "eliqhamukayo" kulolu hlobo - ibhilikrikhi, ngokuqukethwe kokuphikisana ne-antioxidant, okusho ukuthi abahlali bomuzi kufanele bakhokhe inhlonipho enkulu emculweni!
Ukusuka omisiwe kuya ku-sultana
Amagilebhisi amakhulu, omisiwe ngembewu, abizwa ngokuthi omisiwe, futhi amancane, ngaphandle kwembewu, i-sultana noma i-ugqumugqumu. Futhi omisiwe noma i-kishmish kusuka kumagilebhisi amnyama kuthathwa njengelusizo kunomhlophe. Ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwe-potassium, izazi ze-cardiologists zimdumisa. Bakholelwa futhi yizinzwa ze-neuropathologists: okuqukethwe okuphawulekayo kwe-magnesium kwenza izithelo zomvini eziwusizo ezibalulekile ekulwa nokucindezeleka. Bhala kanye nabakhulile ukuvimbela ukuphefumula kwegazi: omisiwe - umholi okuqukethwe kwe-boron.
Lapha izinsuku ezinjalo
Kulezi zithelo ezomisiwe, kunamavithamini, ngaphandle kwamavithamini E kanye ne-biotin, kodwa ikakhulukazi amavithamini B5 amaningi, okwandisa ubungqabavu bethu. Izinsuku - i-antipyretic enhle kakhulu, iqukethe into efana ne-aspirin, futhi isebenza ngokulahlekelwa kwe-calcium emzimbeni nokuqukethwe kwayo ezingeni elifanele.
Lapho ukhetha izithelo ezomisiwe, kufanele unake umbala wazo . Ngakho-ke, ama-apricot omisiwe, isibonelo, amnyama phakathi nenqubo yokomisa, kodwa ngenxa yesethulo ngokuvamile uphathwa ngamakhemikhali. Ngakho-ke, ukhethe kangcono ukhethe ama-apricot omisiwe, noma ngabe ungathandeki ekubukeni. Futhi, ungakhohliswa yizithelo ezimnandi zomlimi omuncenga: ukubukeka "okukhazimulayo" kubonisa ukuthi izithelo ezomile zaphathwa nge-glycerin. Kwezinye izithelo, ngisho nezinambuzane zingabhekana, kepha lokhu kungaphezulu "kwesibonakaliso sekhwalithi", okubonisa ukuthi azikho amakhemikhali lapha.
Izithelo ezomile ziyasiza kakhulu emzimbeni wesifazane. Umphumela wezinto zemvelo kanye ne-glucose yezithelo ezomile nakho kunomphumela omuhle ekusebenzeni kwamathumbu nezinye izitho ezibalulekile. Ukuze uhlale uphilile, sebenzisa izithelo omisiwe okungenani izikhathi eziningana ngesonto. Lokhu ngeke nje kulungise futhi kuzinze izitho zangaphakathi zakho: izinso, isibindi, inhliziyo, indlela yokugaya ukudla, kodwa futhi nokuthuthukisa ukubukeka kwakho. Phela, izithelo ezomile azizona izithelo, lapho ushukela wanezelwa khona, ezitshalweni ezomile uqukethe i-glucose yemvelo futhi ewusizo kakhulu, okubangela ukuba impilo yakho ibe nobuhle. Yidla okungaphezulu kokubaluleka okunjalo, futhi kungekudala uzobona ukuthi uqale uzizwa kangcono kakhulu. Yidla izithelo zemvelo ezomisiwe kuphela: bukela ukudla kwakho kwansuku zonke futhi udle izinto eziluhlaza okwedlulele kanye neminye imifino nezithelo enempilo: kungekudala uzozwa umehluko phakathi kokudla okusheshayo nokudla okunempilo nokunomsoco.
Ithi, izakhiwo eziwusizo zetiyi
Ushukela we-reed - umkhiqizo onemfashini
Izimbangela nokuphathwa kokulahlekelwa ukudla
Yimuphi umonakalo ongakwazi ukuletha ukunambitheka?
Izakhiwo eziwusizo zamanqamu
Indlela yokubuza umuntu ukuba enze isipho
Izimfihlo 'zokwenza okuhle': ukukhanya kanjani kahle
Othandekayo uThimothewu wayegxeke ngezindebe ezingenayo, isithombe
Imfundo yokudla okunempilo
Indlela yokuchitha umshado ngokungabizi kahle
Ubani ozolala nengane?
Izipho zangempela zomuntu othandekayo